Kismaayo News » Baledweyne, Baqortooyadii la bowd-qalaalay
Baledweyne, Baqortooyadii la bowd-qalaalay
Kn:Shalay ayay ahayd markii loo boqray xil muhiim ka ah bulshada dhaqanka, wax ka yar 24 saac gudahoodna koox wareento ah ayaa bartamaha magaalada Baledweyne ku koomaalay bastooladu guntiga ay ku wateen.
Naxariistii Jano Allaha ka waraabiyee, marxuum Maxamed Sheekh Xuseen oo ku magac dheeraa Marya-cadde, waxaa shalay loo caleemo saaray Gudoomiyaha Golaha marjaca ee Guurtida gobolka Hiiraan.
Maalin kadib, waxaa god aakhiro u diray gacan ka xaqdaran oo Ibliis u soo diray. Walow ay shaaciyeen in mid kamid ah gacan ku dhiiglayaasha ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka ee degmada, hadana waxay dadku farta ku fiiqayaan in falkani foosha xun ay kadanbeeyeen kuwii looga bartay xabad siibka tiirdhexaadka iyo dadka wax galka u ah bulshada.
Falka lagu dilay Maryacadde wuxuu tusaale u yahay sida dadka nabadda jecel ama wax galka ah ee dalka iyo dadkaba badbaada u noqon lahaa ay baylah ugu yihiin cid kasta oo damaaci ka galo naftooda iyo maalkooda.